Bugharịa - WRSP
1931: Vincent Lopez Leaphart, onye ga-abụ John Africa, amụrụ na Philadelphia, Pennsylvania.
1968: Vincent Leaphart bidoro ichikota ihe odide nke ga abu Ntuziaka nke John Africa.
1972: Ndị otu mbu nke MOVE bidoro nzukọ iji kwurịta Ntuziaka nke John Africa.
1973: Bugharịa ndị mmadụ zụtara 309 North 33rd Okporo ámá na Powelton Village agbata obi nke West Philadelphia. Servedlọ ahụ rụrụ ọrụ dị ka isi ụlọ ọrụ mbụ na-ebugharị.
1976: BUPU ndị Janine na Phil Africa amụrụ ọhụrụ, Life Africa, nwụrụ mgbe ha na ndị uwe ojii na-alụ ọgụ n'isi ụlọ ọrụ MOVE.
1977: MOVE guzobere otu ìgwè abụọ: Mkpụrụ nke Amamihe na Richmond, Virginia, na ìgwè nke abụọ, nke mejupụtara ọtụtụ ndị gbara ọsọ ndụ, na Rochester, New York.
1977 (May 20): Njikere agha dị n'etiti MOVE na Ngalaba Uweojii na Philadelphia, nke a na-akpọ Guns na Ihe thezọ Mbata ,zọ Mbata, kwụsịrị n'udo.
1978 (Machị 16): Obodo Philadephia bidoro igbochi isi ụlọ ọrụ MOVE na mbọ “ịchụpụ ha.”
1978 (August 8): Ndị uwe ojii wakporo isi ụlọ ọrụ MOVE, na-eduga na mgbanwee egbe n'etiti MOVE na ndị uwe ojii. Onye uwe ojii James Ramp nwụrụ.
1980: A na-ama MOVE 9 ikpe maka igbu ọchụ James Ramp. Ẹma ẹbiere n̄kpọkọbi isua 100 esịm XNUMX ẹnọ mmọ.
1981: ATF na ndị uweojii na Rochester wakporo obodo MOVE na Rochester, New York. E jidere ndị niile na-agagharị na Rochester, gụnyere John Africa.
1981: A tọhapụrụ John Africa na ngwa agha gọọmentị na ebubo ịgba izu.
1985 (May 13): Ndị otu Ngalaba Uweojii na Philadelphia na Ngalaba Na-ahụ Maka Ọkụ, na-arụkọ ọrụ na ndị mmanye iwu gọọmentị, wakporo isi ụlọ ọrụ MOVE site na egbe, gas na-agba mmiri, na bọmbụ, na-egbu mmadụ itoolu MOVE.
2020: A tọhapụrụ ndị niile bi na MOVE 9 n'ụlọ mkpọrọ.
Vincent Leaphart, nwoke ga-abụ John Africa, [Foto dị n'aka nri] ka amụrụ na West Philadelphia na July 26, 1931 na otu nnukwu ezinụlọ ndị America na-arụ ọrụ na nso nso a nke kwagara n'ebe ugwu site na Georgia. Mgbe Vincent gụsịrị klas nke ise, a chọpụtara na ọ “na-ala azụ n’ọgbakọ.” nchọpụta agbụrụ nke mere ihere nke ukwuu maka Vincent na ụmụnne ya na nke chọrọ Vincent ịga ụlọ akwụkwọ dị iche. Vincent Leaphart nwere ọgụgụ isi pụrụ iche, mana ọ gbalịsiri ike ịgụ na ide ihe na ndụ ya niile. Ọ bụrụ na a chọpụtala ya taa, ọ ga-abụ na ọ nwere nsogbu mmụta, kama ịbụ onye nwere ọgụgụ isi. Dị ka ọ dị, Vincent kwụsịrị ịga akwụkwọ mgbe ọ gbara afọ iri na isii, gụchara naanị klas nke ise.
Na 1952, mgbe ọ dị afọ iri abụọ, Vincent Leaphart debara aha na United States Army wee ziga ịlụ ọgụ na Korea. Ọ bụ onye agha ọhụụ ma jee ozi na agha na afọ gara aga nke agha ahụ. Ọ natara nnwere onwe dị ùgwù site na ọrụ ike na Ọktọba 1954, ka o jechara ozi afọ abụọ ya. Mgbe ọpụpụ site na Army, Vincent nọrọ afọ iri na-abịanụ oge nkewa n'etiti Philadelphia, Atlantic City, na New York, ebe ọ bụla ọ nwere ike ịchọta ọrụ. Na 1961, Vincent Leaphart bi na Atlantic City, ọ zutere ma lụọ Dorothy Clark. Alụmdi na nwunye Vincent na Dorothy siri ike ma, oge ụfọdụ, ime ihe ike. Ha enweghị ike ịmụ ụmụ, nke ahụ bụụrụ ha nnukwu ihe mmechuihu. Di na nwunye ahụ laghachiri Philadelphia n'etiti 1960s. N'ime oge ahụ, Dorothy malitere ịgbaso nkuzi nke alaeze nke Yahweh, otu okpukpe ọhụrụ nke jikọtara Seventy-Day Adventism na British Israelism, nke Reverend Joseph Jeffers guzobere na 1935. Otu afọ mgbe ọ tụgharịrị na Alaeze nke Yahweh, Dorothy Clark gbara mwakpo ebubo megide Vincent Leaphart. Tupu ọkàiwu amalite, o wepụrụ mkpesa ya, na-agwa ndị uwe ojii na ime ihe ike n'ụlọ “mere naanị ugboro abụọ.” N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, di na nwunye ahụ kewara n'ụzọ na-adịgide adịgide.
N’ihe dị ka afọ 1967, mgbe alụm di na nwunye ya gwụsịrị, Vincent Leaphart malitere ịgbanwe na John Africa. Ezinụlọ na ndị enyi Vincent chọpụtara na ọ tola iche, na-eche echiche nke ọma, na-achọkwa ọdịmma onwe ya. Ọ nọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge niile ọ na-etinye n'otu ụlọ na West Philadelphia na-emepe echiche ndị ga-abanye n'ime akwụkwọ edemede a na-akpọ Ntuziaka nke John Africa.
Na 1972, otu ụmụ akwụkwọ kọleji na-agụ akwụkwọ na Community College of Philadelphia malitere ịtụle Ntuziaka nke John Africa dị ka akụkụ nke usoro mmụta mmekọrịta ọha na eze ha. Mgbe semester kwusiri na Disemba nke 1972, otutu umuaka umu akwukwo no na nzuko a. Offọdụ nzukọ ndị a mere n'ụlọ John Africa. Mụnne ya nwanyị kpọrọ ezinụlọ ha gaa nzukọ. Nwanne ya nwanyị bụ Laverne Sims kpọtara ụmụ ya ise: Debbie dị afọ iri na isii, Gail dị afọ iri na anọ, Chuckie dị afọ iri na abụọ, na ọdụdụ ya abụọ, Sharon na Dennis. Laverne na ụmụ ya ise niile ga-emecha gbanwee gaa megharịa ndụ ha n'okpukpe. Jerry Ford, onye bụbu nwa akwụkwọ na mahadum, tụgharịrị gaa MOVE wee bụrụ Jerry Africa. O sonyeere Delbert Africa (onye malitere iso John Africa tupu usoro kọleji amalite), Laverne Sims, Louise James, Muriel Austin, Merle Austin, Don Grossman, na ụmụ nwanne nwanyị asaa nke John Africa ka ha bụrụ isi mbụ nke MOVE. Ọnụ, MOVE ndị mmadụ zụtara ụlọ na Powelton Village agbata obi na West Philadelphia. Houselọ ahụ, 309 North 33rd Street, rụrụ ọrụ dị ka isi ụlọ ọrụ MOVE ma kpọọ ya Houselọ nke John Africa Wuru. NDE mmadụ na-emegharị ụlọ ahụ ghọrọ ụlọ dị nsọ maka okpukpe ha. Fọdụ ndị na-ebugharị bi n'ụlọ ahụ. Ndị ọzọ dinara ebe ozo mana ha noo otutu oge na isi ulo oru MOVE. BER of ìgwè nkịta buru ibu ma na-eto eto, nke nwere ike ịbụ ọnụọgụ abụọ na atọ, biri n'otu ọkara nke duplex ahụ. Bugharịa ndị mmadụ [Foto dị n'aka nri] biri, rụọ ọrụ, ma fee ofufe na nke ọzọ.
Bugharịa ndị mmadụ weghaara isi ụlọ ọrụ na ebe dị nsọ nke dịpụrụ iche na usoro daa. Ha gwuru okporo ájá ndị ahụ n'ihu ụlọ ha ka osisi wee nwee ike ịlaghachi. Ha hapụrụ nkà na ụzụ na agụmakwụkwọ nkịtị maka onwe ha na ụmụaka a mụrụ n'ime MOVE. Ndị otu a nakweere ndụ ndụ nke John Africa. N’ụbọchị ọ bụla, ndị mmadụ na-akpọgharị na-eteta ụra tupu chi abọọ, banye otu bọs ma gbaga n’ogige ntụrụndụ dị nso ebe ha na-agba ma bulie ibu. Ha laghachi n'ụlọ ka ha na-elekọta nkịta, wee malite ọrụ ụbọchị ahụ. N'ụbọchị ndị a, MOVE ndị mmadụ lekwasịrị anya n'ịgbasa ozi John Africa na ndị obodo. Ha na-akụzi ihe ọmụmụ banyere nkuzi John Africa ugboro abụọ n'izu, bụ nke ndị mmadụ na-anabata. Ha weghachitere ndị ọgwụ ọjọọ riri ahụ, gbaa ndị na-eto eto ume ka ha jụ ime ihe ike, ma nyere ndị agbata obi ha na-enweghị ọrụ aka ịkwụ ụgwọ ụlọ ha. N'ime afọ ndị mbụ a, IME ndị mmadụ, dị ka ọtụtụ ndị agbata obi ha si dị, nyere aka ọnụ na agbata obi.
Nsogbu nke MOVE malitere mgbe ha malitere itinye aka na-emeghị ihe ọ bụla megide ìgwè ndị na-eme ihe ike. Site na 1973 ruo 1976, MOVE ndị mmadụ gosipụtara megide ọtụtụ narị mmemme ọha na eze. Ha mere ngagharị iwe ma ndị otu na-emesapụ aka ma ndị na-achọghị mgbanwe. Ha na-agwa onye ọ bụla okwu rụrụ arụ site na Jane Fonda gaa otu ụmụ akwụkwọ kọleji na-akpọ oku ka a ghara iwepu President Nixon. Ha na-akpaghasị nzukọ nke okpukpe ndị ọzọ, gụnyere ndị Buddha, Quakers, na Nation of Islam, na-agbakarị arụmụka banyere nkà mmụta okpukpe. EME ndị mmadụ mere ngagharị iwe megide ndị na-eme ihe ndị ruuru mmadụ. Na 1973 naanị, ha mere ngagharị iwe Cesar Chavez, onye na-eri nri bụ Adelle Davis, Jesse Jackson, Daniel Ellsberg, ndị na-elekọta mmadụ, ndị Kọmunist, Philadelphia Board of Education, American Indian Movement, Richie Havens, na ọtụtụ ndị ọzọ. Nnukwu mkpesa nke MOVE megide ìgwè ndị a dị iche iche bụ na ha chọrọ iweghachi ụwa site na n'ime Sistemụ, ebe John Africa kụziri na ụdị mgbanwe a agaghị ekwe omume. Na nzaghachi, Ngalaba Uweojii na Philadelphia malitere ijide ndị na-agagharị na ugboro ugboro. KPỌRỌ ndị mmadụ mere atụmatụ na, n'etiti afọ ndị 1970, ndị uwe ojii nwụchiri na nkezi, otu onye kwa ụbọchị.
Oge mgbanwe dị ukwuu n’akụkọ ihe mere eme bụ ọnwụ nwatakịrị MOVE, Life Africa. N'ime awa ndị a kara aka nke March 28, 1976, otu ìgwè MOVE ndị ewepụtara n'ụlọ mkpọrọ n'oge na-adịbeghị anya rutere n'isi ụlọ ọrụ MOVE. BUPU ndị mmadụ bata n’ime ụlọ wee nabata ha. N'oge na-adịghị anya, ndị uwe ojii bịara, na-akọwa na ha anatala mkpesa mkpọtụ. Dabere na ihe ndekọ MOVE, onye uwe ojii were okpiri kụọ Chuckie Africa dị afọ iri na ise isi, bute ọgụ dị n'etiti MOVE na ọtụtụ ndị uwe ojii. Site na oge ọgụ ahụ biri, ndị mmadụ MOVE na-abụ ndị ọbara na-emerụ emerụ, ma jidere ụmụ nwoke isii MOVE. Ka ụgbọ ala ndị ahụ na-agba ọsọ, ndị MOVE na-ejideghị jidere na Janine Africa na-efu. N’oge na-adịghị anya ha hụrụ ya ka ọ na-ebe akwa n’ime ime ụlọ, na - ejide nwa ọ mụrụ ọhụrụ, Life Africa, okpokoro isi ya. O jidere ya mgbe ọ na-anwa igbochi onye uweojii iti nwunye ya ihe, Phil Africa. Onye uwe ojii ahụ kụrụ Janine kama, kụtuo ya. Ndụ Africa dara ada.
Ọnwụ nke Life Africa bidoro ịmegharị ọtụtụ ihe omume dugara, n'ikpeazụ, na Bugharị Bọmbụ mgbe afọ itoolu gachara. N'ịbụ ndị kwenyesiri ike na usoro ahụ na-agbalịsi ike ibibi ìgwè ahụ iji gbochie Ozizi nke John Africa, Gbanwee nkwenye ha na nguzogide na-enweghị isi ma nakweere ozizi nke ịgbachitere onwe ha. Ha kwupụtara mgbanwe a n'ihu ọha na Mee 20, 1977, na ngosipụta nke ike. Mgbe njide ọzọ nke onye na-agagharị, ndị ọzọ na-ebugharị na-eguzo n'ihu ihe owuwu nke isi ụlọ ọrụ MOVE na-eji égbè agbagbu. Ihe omume a, nke ndị nta akụkọ kpọrọ aha egbe na nnọchi nke Porzọ Owuwu announcedzọ Mbata, kwupụtara ọkwa ọhụrụ nke MOVE nke ịgbachitere onwe ya. Na nzaghachi, Ngalaba Uweojii na Philadelphia guzobere ndị otu nyocha elekere elekere, sitere na etiti ndị isi iri abụọ na iri ise, na mpụga isi ụlọ ọrụ MOVE. Ha nwere iwu iji jide onye ọ bụla na-agagharị agagharị na-ahapụ ụlọ n'agbanyeghị na, mgbe afọ ole na ole gachara, ndị uwe ojii kwetara na ndị na-agagharị agwaghị iwu ọ bụla n'oge egbe egbe na nnọchi ọnụ ụzọ ụlọ.
Na Febụwarị 21, 1978, ọnwa asatọ ka esemokwu ahụ malitere, Obodo nke Philadelphia nyere MOVE ka ha wepu ndị otu nyocha ma kwụsị iyi egwu nke ijide ma ọ bụrụ na ndị mmadụ kwenye ịhapụ isi ụlọ ọrụ MOVE ma kwaga ma ọ dịkarịa ala kilomita abụọ pụọ. BER rejected ịjụ onyinye ahụ n'ihi na ha kwenyere na obodo ahụ anaghị eji ezi okwukwe agba izu. Na nzaghachi, onye isi obodo Philadelphia, Frank Rizzo, nyere ndị Ngalaba Uweojii na Philadelphia iwu ka ha gbasaa ndị ọrụ nyocha ya na mgbochi zuru ezu [Foto dị n'aka nri] nke isi ụlọ ọrụ MOVE. N’ikwe nkwa na “ọbụnadị ijiji agaghị enwe ike ịba,” Rizzo nyere iwu ka mmiri mechie ụlọ ahụ ka ọ bụrụzie nke ndị uwe ojii ga-ejichi maka nri ma ọ bụ ihe oriri niile ezubere maka ịkwapụ.
Mkpokọta agụụ nke obodo nke isi ụlọ ọrụ MOVE kwụsịrị na August 8, 1978. Onye isi obodo Rizzo, na-enwe nkụda mmụọ n'ihi enweghị ike ịkwapụ M n'ụlọ ha ma na-enwewanye nchegbu banyere ego ballooning nke mgbochi ahụ, kwere nkwa ịkwụsị esemokwu ahụ. Ọ kwuputala atụmatụ maka Ngalaba Uweojii na Philadelphia ịwakpo ụlọ MOVE ma jide onye ọ bụla nọ n'ime. Ọ dọrọ aka na ntị na ọ bụrụ na onye ọ bụla ajụ njide, "a ga-eweda ikike iwu." N'ụtụtụ nke August 8, ndị bulldozers malitere ibibi ihe owuwu ụzọ mbata nke MOVE iji mee ka egbe mmiri ọkụ na-ekpuchi ụlọ. Mgbe MOVE azaghị, agbapụ bidoro. (E nwere ụfọdụ arụmụka banyere onye gbara onye mbụ.) Mgbe agbapụ ahụ kwụsịrị, a gbagburu onye uweojii James Ramp, onye gbara afọ iri abụọ na atọ nke ngalaba ndị uweojii na Philadelphia's Stakeout Unit. Ka ọ na-erule elekere asatọ nke ụtụtụ n'ụtụtụ ahụ, ndị niile na-agagharị n'ụlọ ahụ (iri na otu okenye na ụmụaka isii) nyefere ndị uwe ojii. Ndị ntaakụkọ hụrụ ka ndị uwe ojii Philadelphia anọ wakporo Delbert Africa ka ọ na-achọ ịtọgbọ. Foto weghaara ndị uwe ojii na-eti Delbert isi okpu okpu agha ndị uwe ojii.
BEBARA na-agba ọsọ mgbe agbapụrụ ndị uwe ojii. E boro mmadụ itoolu ebubo, n'otu aka, igbu ọchụ nke onye uweojii James Ramp, ma maa onye nke ọ bụla ikpe n'agbata afọ iri atọ na otu narị afọ n'ụlọ mkpọrọ. A bịara mara ha dị ka MOVE 100. John Africa duru ndị nke abụọ na-agagharị (ndị na-agbapụ ugbu a site na iwu) na Rochester, New York, ebe ha nakweere njirimara ọhụrụ wee zoo ndị uwe ojii. Otu nke atọ nke MOVE, nke ka ukwuu n'ime ụmụ nwanyị na ụmụaka, kwagara Richmond, Virginia iji bido isi ohuru ohuru nke a na-akpọ Mkpụrụ nke Amamihe. Ndi mmanye iwu mechara kwusi ma megharia akwukwo ndi ozo.
Na Mee 13, 1981, otu ndị ọrụ gọọmenti iri isii sitere na Bureau nke Alcohol, Tobacco, and Firearms (ATF) wakporo obodo MOVE na Rochester, na-ejide mmadụ itoolu niile ebe ahụ, gụnyere John Africa. Ndị ATF boro ebubo na John Africa nwere atụmatụ ịtụ ihe na-agbawa agbawa n'ụlọ gọọmentị gburugburu obodo ahụ. Ọ họọrọ ịnọchite anya onwe ya n'oge ikpe ikpe gọọmentị etiti ya, nke a kpọrọ United States v. Leaphart na Robbins. Ikpe gọọmentị dabere na akaebe nke onye na-enye ihe nzuzo, Donald Glassey, onye akaebe ya na-agbagwoju anya na, mgbe ụfọdụ, na-emegiderịta onwe ya. Agbachitere John Africa leghaara nkọwa nke ebubo ahụ, nke o lere anya na ọ bụ nke e mepụtara, ma mesie ike ọrụ ebube ya ike. Ndị ọka ikpe ahụ ekwenyeghị n'okwu gọọmentị ma hapụ John Africa na ebubo niile.
Mgbe a tọhapụsịrị ya, John Africa laghachiri West Philadelphia, chịkọtara ihe fọdụrụ na ndị na-eso ụzọ ya, wee guzobe isi ụlọ ọrụ ọhụụ na ụlọ nke nwanne ya nwanyị, Louise James nwere, n'onwe ya onye na-agagharị. Ruo afọ ole na ole, KP MOVR avo zere esemokwu ndị ọzọ. Ha nọrọ ihe ka ọtụtụ n’oge ha na-agba mbọ maka mwepụta nke MOVE 9. Mana ka ọ na-erule n’oge ọkọchị nke 1984, ma ndị gọọmentị etiti ma ndị ọrụ nchekwa obodo ekpebisiwo ike ịkwụsị ọnụnọ MOVE n’agbata obi. Na Mee 30, 1984, ndị nnọchi anya PPD, FBI, Nzuzo Ọrụ, Ngalaba Na-ahụ Maka Ikpe Ziri Ezi na United States, Ọfịs Attorney nke Obodo, Ọfịs Mayor na Kọmịshọna ndị uwe ojii Steeti zukọtara iji kwurịta ihe iwu kwadoro maka ịwakpo isi ụlọ ọrụ MOVE. Ha ahụghị. Ọrụ nzuzo ahụ nyochara iyi egwu MOVE megide Onye isi ala Reagan wee chọpụta na ha dị oke nghọta ka ha nwee ikpe. Ma ndị FBI ma ọ bụ Ngalaba Na-ahụ Maka Ikpe na-enweghị ike iche na ọ nwere ezi ihe kpatara ọ ga-eji waba ụlọ ma ọ bụ wepụ ụmụaka. Enweghị akwụkwọ ikike steeti ma ọ bụ nke gọọmentị etiti.
N’agbanyeghi na enweghị ihe iwu kwadoro ị wakpo ụlọ ahụ, ka nzukọ ahụ gasịrị, Kọmịshọna ndị uwe ojii Gregor Sambor bidoro ịwepụta atụmatụ maka iwe megide ndị bi na ụlọ MOVE na Osage Avenue. Atụmatụ a bụ maka nnukwu mwakpo nke ụtụtụ ga-ejide ndị mmadụ na mberede. Dị ka ha mere na 1978, ndị ọrụ Ngalaba Na-ahụ Maka Ọkụ ga-eji egbe ojoo mee ka windo mebie ụlọ ma mechie ụlọ. N’adịghị ka 1978, ndị uwe ojii na-ezube iji bọmbụ na-agba oghere na mgbidi na elu ụlọ isi ụlọ ọrụ MOVE. Ha nwere olile anya na oghere ndị ahụ ga-eme ka ha jupụta n’ụlọ. Ọ bụrụ na mmiri na gas anya mmiri apụtaghị apụ, a ga-eji bọmbụ ọzọ gbapụ n'ọnụ ụzọ ụlọ, na-enye ohere ka ndị otu nwoke asaa wakporo ụlọ ahụ. Ọ bụrụ na MOVE gbalịrị ịgbapụ n'azụ, ndị otu mwakpo ọzọ ga-ezute ha. A ga-eguzo n'akụkụ anọ nke ụlọ dị nso (snipers, ikekwe) n'elu ụlọ nke ụlọ ndị dị nso.
Ngalaba ndị uweojii na Philadelphia tinyere atụmatụ ha na nke mbụ ya na August 8, 1984. Ndị uwe ojii narị atọ na ndị ọkụ ọkụ gbara ụlọ ọrụ MOVE gburugburu. Ha ji ụgbọ ịnyịnya iri na ise, ụgbọala abụọ na-ebu agha, ìgwè ndị na-agba bọmbụ, na ọtụtụ ọgba aghara na ụgbọ ala. Imirikiti ndị agbata obi akpọpụla n'abalị ahụ, kwa ndị uwe ojii nyere iwu. Ndị uwe ojii ahụ ji égbè ha chere ma ọ dịghị ihe merenụ. N’enweghi ihe kpatara iwu ga-eji wakpo ụlọ ahụ, ndị uwe ojii dabere na MGBE ịmalite esemokwu. Mana MOVE jụrụ ịnara ụgbụ ahụ, onye njikwa obodo Leo Brooks kwụsịrị mwakpo ahụ.
Ngalaba ndị uweojii na Philadelphia wegharịrị oge mwakpo a maka Mee 13, 1985. N’ụtụtụ ahụ, Ngalaba Uweojii na Philadelphia, na-eji ngwa agha ndị agha na ihe mgbawa ha gbaziri n’aka ndị FBI, wakporo ụlọ MOVE na Osage Avenue, na-egosi na ọ ga-enye iwu njide ejidere mmadụ anọ na-agagharị. n'ime. BAT ndị nọ n’ime ụlọ gbaa ndị uwe ojii égbè. Ndị uwe ojii zaghachiri site na ịgbanye ihe mgbaba 10,000 n'ime ụlọ n'ime oge nkeji iri itoolu. Ha jiri ihe gbawara agbawa n’oghere n’ime mgbidi ahụ, bụ nke ha ji were mmanu mmiri na-agba n’ụlọ MOVB MOV MOVB MOV. Otu n’ime bọmbụ ndị ahụ gburu John Africa. Ngalaba na-ahụ maka ọkụ jiri egbe mmiri rikpuo ụlọ ala. Usoro ndị a amanyeghị ịbugharị ndị mmadụ na-agagharị, ma ọtụtụ awa gafere n'enweghị esemokwu ọ bụla ka ụmụaka ndị na-ebugharị n'ime ụgbọala jupụtara na Frank, Raymond, na John Africa nwụrụ n'elu ụlọ. N'ihe dị ka elekere ise nke ehihie, otu onye so na Ngalaba Mwakpo Bomb nke ndị uweojii na Philadelphia, na-eji helikopta nke Commonwealth nke Pennsylvania, tụba ụyọkọ nke ihe mgbawa C-4 na-enwu ọkụ na Tovex n'elu ụlọ nke ụlọ MOVE. Mkpebi ịtụba bọmbụ n'ụlọ ahụ emeghị nke ọma, dịka ndị uwe ojii ga-emecha kwuo, mana emeela atụmatụ ihe karịrị otu afọ. Bọmbụ ahụ mepụtara nnukwu ihe gbawara na ọkụ, nke ndị isi kpebiri ịhapụ ka ọkụ wee nweta uru ha. Ọkụ a manyere ndị dị ndụ MOVE (ndị okenye anọ na ụmụaka isii) ịgbaba n'okpuru ụlọ ahụ gaa azụ uzo ozo. Ozugbo ha pụtara, ndị otu ndị uwe ojii Philadelphia gbara ọkụ, gbagburu Conrad Africa na Tomaso Africa, ma mee ka ndị ọzọ laghachi n'ọkụ ahụ, ebe mmadụ abụọ nwụrụ. Ọkụ ahụ nọgidere na-ewe ọkụ na-enweghị nchịkwa, wee gbaa ụlọ obodo ahụ dum ọkụ, [Foto dị n'aka nri] na-ebibi ụlọ iri isii na abụọ.
Nnyocha nyocha zuru ezu were izu ole na ole mana, mgbe ájá kwụsịrị, ndị nchọpụta chọtara ihe fọdụrụnụ nke iri na otu Bugharịa. John Africa nwụrụ n'oge ụtụtụ, ikekwe site na bọmbụ gbawara. Ndị nyocha ahụ enweghị ike ịnye njirimara dị mma, ebe ọ bụ naanị anụ ahụ ọkụ ka a napụtara. Frank Africa na Raymond Africa nwụrụ site n'otu ogbunigwe ahụ gburu John Africa ma ọ bụ site na mgbọ ndị uwe ojii obere oge mgbe nke ahụ gasịrị. Anwụrụ ọkụ ma ọ bụ ntụ adịghị n’ebe foduru nke ngụgụ ha, na-egosi na ha anwụọla tupu ọkụ ahụ agbaa. Conrad Africa, Rhonda Africa, na Theresa Africa nwụrụ obere oge bọmbụ ikpeazụ ahụ gasịrị, site na ọnya égbè, anwụrụ ọkụ anwụrụ ọkụ, ma ọ bụ ire ọkụ. Childrenmụaka (Sue Africa dị afọ itoolu Tomaso, ụmụ nwanyị abụọ Conseualla Africa Zanetta na Tree, iri na atọ na iri na anọ, Janine na Phil Africa nwa nwoke dị afọ iri Phil, na Delbert na Janet Africa nwa nwanyị dị afọ iri na abụọ Delisha) nwụrụ n'ime okpuru ulo. Ihe fọdụụrụ otu n'ime ụmụaka ahụ (ndị nyocha ahụ enweghị ike ịchọpụta onye, ​​ọ bụ ezie na ọ ga-abụ na Tomaso) nwere obere bekee sitere egbe ndị uwe ojii.
Mgbe ogbunigwe ahụ gbara, Maazị Wilson Goode họpụtara otu ndị ama ama n’obodo ahụ, gụnyere ndị ụkọchukwu, ndị isi ọchịchị, ndị ọka iwu na ndị na-eme ngagharị iwe, ka ha bido ime nchọnchọ n’obodo ahụ maka nsogbu MOVE. Nnyocha ahụ were ọnwa ruo ọnwa wee gbasaa ikpe na telivishọn na redio. MOVlọ ọrụ MOVE, dịka a kpọrọ otu a, kpebisiri ike na ka ọ na-erule mmalite 1980s MOVE "ghọrọ usoro ọchịchị aka ike, nke na-eyi egwu ime ihe ike" nke "dị njikere ma dị egwu," ma nwee ike "ụjọ". Mana MOVE Commission kwetakwara na onye isi obodo, onye isi obodo, na kọmishọna ndị uwe ojii "nwere oke nleghara anya ma tinye ndụ ndị ụmụaka n'ihe egwu na n'ụzọ doro anya" na omume obodo "oke na enweghị ezi uche." Kọmịshọn ahụ kpọrọ atụmatụ ịtụ ogbunigwe ahụ "akpachapụghị anya, chere echiche ma mee ngwa ngwa." Ha boro ndị uweojii na Philadelphia ebubo na ha gbagburu ụmụaka MOVE ka ha na-anwa ịgbapụ n'ọkụ ahụ, na-amanye ha ịlaghachi n'ime ụlọ ahụ ọkụ. N'ihi nke a, ndị MOVE Commission kwubiri na ọnwụ nke ụmụaka ise MOVE bụ "igbu ọchụ na-enweghị ihe kpatara ya nke ndị juri ukwu ga-enyocha." Na njedebe, agbanyeghị, naanị onye a na-ebo ebubo mpụ mgbe ebugharị Bọmbụ ahụ bụ Ramona Africa, naanị onye toro eto gbanahụrụ Mwakpo B MOVB alive ndụ. E jidere Ramona n’aka ndị uwe ojii mgbe ọ gbanahụrụ ọkụ wee kuru ya ụlọọgwụ. Enye ama ata ata nsak ke ikang, mme ndudu emi okodude oto ke uwem esie. Ọ jụrụ ịgwọ ọrịa, na-ekwu maka nkwenkwe okpukpe ya, wee kpọga ya n'ụlọ mkpọrọ. E boro ya ebubo itoolu: mkpesa atọ nke mwakpo a na-eme ihe ọjọọ, ebubo atọ nke itinye ndụ onye ọzọ n'ihe egwu, ịkpalite ọgba aghara, ịgba izu, na iguzogide njide. A mara Ramona Africa ikpe ma tụọ ya mkpọrọ afọ asaa.
John Africa malitere ide ederede dị nsọ nke MOVE, nke a ga-akpọ dị ka Ntuziaka nke John Africa, n'oge mgbụsị akwụkwọ nke 1968. John Africa kwuru Ntuziaka n'ime afọ isii. Ọtụtụ mmadụ nyeere ya aka ịmepụta ihe odide ahụ. Ha na-akọwa usoro ahụ n'otu aka ahụ. John Africa ga-anọdụ ala n’oche ma ọ bụ n’ala ma bido kwuo okwu. Onye nke abụọ, nke bụbu ndị ezi-na-ụlọ ya ma emesịa ndị na-eso ụzọ ya, ga-etinye okwu ya na typewriter, na-agbasi mbọ ike ịnagide usoro mkpughe ya. John Africa nyere ndị nyere ya aka ka ha pịnye mkpụrụedemede ukwu na ka ha ghara iji oge ọ bụla. Mgbe ụfọdụ, ọ ga-akwụsịtụ, ọ bụghị iji kpokọta onwe ya ma ọ bụ chee echiche ihe ọ ga-eme na-esote, kama iji nye onye na-eme ya ahụ oge iji jide ya. O wee bulie aka nri ebe ọ kwụsịrị.
Ka ọ na-erule ngwụsị 1970s, MOVE ndị mmadụ kewara ihe odide ahụ na ngalaba, ma hazie nkuzi John Africa n'usoro. Akụkụ ndị kacha ochie nke ihe odide ahụ nwere ozizi John Africa banyere akụnụba, igbochi ndị otu na gọọmentị. Oge n'aga, Ntuziaka toro ịgụnye ngalaba n'ọtụtụ isiokwu, gụnyere okike, mmekọahụ, nri, ọnwụ, ntụrụndụ, ọdịmma anụmanụ, alụm di na nwunye na ịgba alụkwaghịm, ịmụ ụmụ, na ite ime. Site na 1974, IME ndị mmadụ na-asọpụrụ ederede dịka akụkụ Akwụkwọ Nsọ, na-ekwukarị Ildkpụrụ Guild dị ka “Bugharịa Akwụkwọ Nsọ.” NDE na-agagharị agagharị kwenyere na ozizi dị n'akụkụ Akwụkwọ Nsọ a nwere ikike karịrị nke mmadụ iji metụta “kemịkal ahụ” nke ndị nụrụ ya.
n'ozuzu, Ntuziaka nke John Africa nye nkowa maka, na azịza banyere, nsogbu nke ihe ojo. John Africa kpọrọ ikike nke ihe ọjọọ “usoro ụwa nke emezigharịrị,” ma ọ bụ, ugboro ugboro, “Usoro ahụ,” na-agbaziri ahịrịokwu ndị New Left radicals mere ka ewu ewu na 1960s iji kọwaa ikekete ọchịchị, nrụrụ aka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na usoro neoliberal na-apụta. John Africa bu ihe ndia n’uche mgbe o dere banyere sistemu, mana o bu n’obi ihe kariri nke a. Nye ya, sistemụ ahụ bụ isi maka usoro nghọta. Mụ mmadụ, n'adịghị ka anụmanụ ọ bụla ọzọ, nwere ikike iche echiche banyere onwe ha nke ọma na ile onwe ha anya n'ụzọ gabigara ókè. Ikike iche echiche nke ọma mere ka ihe a kpọrọ mmadụ ghara inwe afọ ojuju n'usoro okike nke Ndụ. Mụ anụmanụ anaghị enwe afọ ojuju na ụwa. Ha na-eme mmuo, na-emezu ebumnuche ha. Na nke a, dị ka John Africa si kwuo, bụ ihe na-etinye ụmụ anụmanụ na chi. Grewmụ mmadụ tolitere maka isi ha na ikike ha nwere ịghọta na ịgbanwe ọnọdụ ha. Ma ịmara azụ azụ. Createdmụ mmadụ kere echiche, echiche, sistemụ, usoro, echiche, ọnụọgụ, ụdị echiche niile nke mere ka ha gharazie ibi ndụ okike. Echiche ndị a nke abụọ, nke sitere n'ọbara ụmụ mmadụ, kewapụrụ anyị n'ihe John Africa kpọrọ “ngosipụta zuru oke nke ihe zuru oke.” Ahụmahụ pụrụ iche nke mmadụ ibi na nkewapụ na Life bụ ihe o bu n'uche "sistemụ."
N'ime echiche okpukpe ya, Sistemu bụ ikike nọ n'ọrụ. A ghaghị imegharị ya. O jidere ụwa n'agha, ma enwere ike ịgbapụ. Ozugbo ndị na-agagharị agagharị anọghị na sistemụ ahụ, ha nwere ike ịrụ ọrụ iji weda ya. Na omume, IME ndị mmadụ chọrọ igbochi mmebi nke sistem mebiri. Ihe omume a yiri ka ọ gbanwere oge, mana n'ime afọ ole na ole mbụ nke otu ahụ, MOVE kwenyere na ịkọwa esemokwu na omume ihu abụọ ndị dị na Sistemu ga-emeghe anya ndị mmadụ na ihe ọjọọ nke ụwa ma mee ka usoro ahụ pụta. John Africa gbahatara echiche a, n'ụzọ gbagọrọ agbagọ, site n'aka Hegel na Marx.
Ihe omuma ya nke sistem nwere uzo doro anya ya na nke ndi Kristain nke Fall. A zụlitere John Africa na Chọọchị Black, yabụ ọ ga-abụrịrị na ọ maara nke ọma ụfọdụ mgbanwe nke Augustinian theodicy. N'ime ọgụgụ a nke Akwụkwọ Jenesis, e kere ụmụ mmadụ ka ha na Chineke nwee mmekọrịta ma bie ndụ n'ụzọ zuru oke na ụwa. Ma ụmụ mmadụ nupụrụ isi, jiri ịdị ndụ a zuru okè mara ihe ọma na ihe ọjọọ. Utịp nsọn̄ibuot emi esịne n̄kpa, bụt, ye idiọkn̄kpọ. John Africa buru akụkọ banyere Eden n'ogologo uche ya. Adam na Iv mụtara ihe ha na-ekwesịghị ịmụ, ya mere, ọ bụrụ na ihe ọmụma a machibidoro eme ka ihe a kpọrọ mmadụ dapụ site na ịdị adị nke Iden, ọjụjụ ịjụ usoro nke nghọta mmadụ ga-eme ka ụmụ mmadụ laghachi na paradaịs. Dị ka ụfọdụ ọgụgụ nke Fall, akụkọ banyere usoro sistemụ bụ nke na-adịghị adị n'oge. Ọ bụ ma mmalite ma oge ebighi ebi: n'oge gara aga, ugbu a, na ọdịnihu. Usoro a malitere mgbe mmadụ malitere izi nri. Ọ pụtara mgbe ihe a kpọrọ mmadụ chọrọ ịkpụgharị nnụnụ n'ụgbọ elu. Ọ na-aga n'ihu na-apụta mgbe ndị sayensị gbanwere mkpụrụ ndụ ihe nketa. Sistemụ, na nkwagharị na-agbanwe agbanwe, na-agbanwe agbanwe mgbe niile, ọ na-adịgide ndụ.
Agbanyeghị na sistemụ ahụ, n'ọtụtụ ụzọ, na-eweghachi ọdịda, etu John Africa siri kọwaa ihe ya na nkwenye nke mgbapụta ya gbanyere mkpọrọgwụ n'okpukpe na nke ọchịchị na mbubreyo 1960. Ihe owuwu nke sistem bụ maka ụmụ mmadụ, nchụpụ nke onwe sitere na ụwa maka na usoro nke abụọ na-ewu nke ụmụ mmadụ mepụtara iji ghọta ma were ụwa nke mmadụ "kewapụrụ" onwe ya na usoro okike nke ụwa. Alienation nọ n’ikuku mgbe John Africa mepụtara usoro a na mbubreyo 1960 na mbido 1970s. Somefọdụ n'ime ọgbọ ọganihu nwa ọhụrụ (ọgbọ nke isi mmalite si pụta) mepụtara radicalism "post-scarcity". Nke a bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke lekwasịrị anya n'ọdịbendị, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ndọrọ ndọrọ ọchịchị karịa nke metụtara ahaghị nha nke akụ na ụba nke metụtara ọgbọ ndị gara aga. Gafee mba ahụ, na ụlọ ọrụ sitere na YMCA na Kọmitii Na-ahụ Maka Nchịkwa Ndị Mmụta, site na Mmụta maka Democratic Society na Black Panthers, ọgbọ nke ruru afọ na 1960s mepụtara okpukperechi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị dabere na asụsụ ndị Kraịst ndị dị adị na Kierkegaard, Tillich, na Bonhoeffer. Nye ha, ihe ga-eme ka ha ghara ịbụ ndị ọbịa bụ ibi ezigbo ndụ. N'ezie, John Africa anaghị agụ akwụkwọ ndị Kraịst, ma o doro anya na ọ na-etinye echiche ndị a n'ụdị ndị ọzọ. Okpukpe nke ndị Kraịst dị na zeitgeist nke afọ 1960. N'ezie, dịka agbata obi John Africa dị na West Philadelphia ghọrọ ebe ọkụ nke New Left radicalism na mgbasawanye nke mahadum ndị dị nso, ịdị adị bụ onye zeitgeist ahụ, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na e gosipụtara echiche ndị ahụ n'ụdị nke ụwa. O kwesịghị iju anyị anya na izi ezi bụ kpọmkwem ihe nkuzi nke John Africa nyere. Ọ kpọrọ MOVE "nzukọ kachasị ahazi ka ejiri aha mmadụ wee nwee nghọta zuru oke."
Ọ bụ ezie na sistemụ ahụ sitere na mmadụ, ọ nwere ọrụ ọzọ na-abụghị omume ụmụ mmadụ. Ọ bụ ikike karịrị nke mmadụ nakwa nke mmadụ. Na echiche John Africa, n'ihi na ndị mmadụ na-emegide sistemu (zuru oke na isi), ha "na-anabata ya". Na ngalaba nke Ntuziaka edere na May 1967, Ọ kọwara na:
“Ahụ́ na-agbakasị onye ọ bụla maka ịda iwu ma mgbe ị mebiri, ị nwere ike ịtụ anya na ị ga-ata ahụhụ, mgbe ị nwere ihe mgbu n'isi gị, ị nwere ihe nfụkasị, mgbe ị nwere ihe mgbu n'obi gị, ị ga-enweta ahụ nfụkasị. . . oge obula obi gi tiri gi ihe, you mara na isi adighi eme. . . abụghị ihe ọ bụla a na-ahụkarị 'na oyi na-atụ, nje abụghị nothin' kama ọ bụ okwu sayensị chepụtara iji kọwaa ọrịa ndị ha na-amaghị nke ha na-agaghị abanye na nke akpọrọ n'ụzọ ziri ezi ''.
Gymụ mmadụ na-ahụ nro na sistem na-egosipụta dị ka ọrịa, mmerụ ahụ, na ahụ riri ahụ. Enwere ike imeri ihe ndị ahụ na-asọ oyi, ọ kụziri, site na mmezigharị nri na mmega ahụ yana enweghị ụdị ọrịa nke ọrịa. O dere, sị:
"E naghị eri ihe na eatin ', ị naghị eri ahụ ụra' ma ọ bụ ihe ọkinụ drinụ na-egbu egbu ', ị na-arịa nfụkasị na mbọ nke usoro a gbanwere agbanwe nke na-enweghị onye nwere ike ịgbari, ịnakwere, itinye aka."
John Africa kụziri na ihe riri ahụ si na ndị mmadụ na-anaghị eche echiche echebara echiche n'ime sistemụ ahụ. Iri riri ahụ, dị ka ọrịa, a pụrụ imeri ya ozugbo ndị na-arịa ya ghọtara na nsogbu ha bụ nanị echiche efu nke ike karịrị nke mmadụ, nke na-akpata ike ọjọọ.
Sistemụ ahụ, ọ bụ ezie na ọ dị ike, abụghị naanị ike na-arụ ọrụ na mbara igwe John Africa. Echiche ya nke ụwa bụ dualistic; ọ ghọtara cosmos dị ka saịtị nke esemokwu nke mere ka ikike nke ezi ihe na ikike nke ihe ọjọọ dịrị. Ike nke ihe ọma gara n'ọtụtụ aha: Iwu Mama, Iwu Okike, Chineke, Iwu Okike, na ọtụtụ oge, Ndụ. Usoro okike, dika nkwughari, sitere na ike a na emekota. Mgbe akpịrị kpọrọ anyị nkụ, nke ahụ bụ Ndụ na - agwa anyị ka anyị drinkụọ mmiri. Mgbe ike gwụrụ anyị, ọ bụ Ndụ na-agwa anyị ka anyị hie ụra. Nke a, IME, bụ Chineke. Ndụ Chineke chọrọ maka ụmụ mmadụ (n'ezie, maka ihe niile dị ndụ) enweghị ike ịpụta karịa. O nweghị ihe Chineke chọrọ ka ụmụ mmadụ rie, hie ụra, mụta ụmụ, ma nwụọ. Dị ka o dere na Ntuziaka, “. . . ngụkọta ntinye nke ụkpụrụ a kwesịrị ka o doo anya, ị ga-eri nri, ị ga-ehi ụra, ị ga-a drinkụ mmanya, nke a bụ okwu ngosi nke ndụ, Iwu ebumpụta ụwa nke Mama nke mmadụ niile ga-agbaso. . . . ” Ugo nke ndi mmadu ji ebi ndu dika iwu a si di (Iwu Mama) bu uzo ha si ebi ndu di nma dika uche Chineke si di. N'ezie, ibi ndu zuru oke dika Iwu Okike (ihe puru ime ma obu ihe mmadu abua mezuru) bu ogo anyi na- Chineke.
Dabere na Ntuziaka, enwere onye ozo ma ewezuga John Africa onye biri ndu zuru oke na Iwu Okike, Jisos onye Nazaret. John Africa ama enen̄ede okpono Jesus onyụn̄ ada enye nte owo emi ekebemde iso ọnọ etop esie. Ọ kpọrọ Jizọs “chi nke onwe, onyenwe eziokwu, onye maara ihe niile.” "Lee nwoke a," Ntuziaka kwuo, sị, “lee chi ahụ, eziokwu na ọ bụ, chi nke ị ga-abụ ma ọ bụrụ na ị ga-abụkwa Kraịst.” "N'ile anya na chi, na Jizọs, ị chọghị ile anya ọzọ, n'ihi na ị na-ahụ eziokwu, ịdị omimi nke eziokwu, ngosipụta ọdịnala nke onwe, ndụ na ume nke okike, nke chi, nke mmadụ niile." Nye ya, a pụrụ ịkpọ Jizọs n'ụzọ ziri ezi Chineke, ọ bụghị n'ihi na ọ bụ ikike karịrị nke mmadụ, kama n'ihi na ọ bụ nwoke biri ndụ n'ụzọ zuru oke na Nature. Ndị Kraịst ga-ata ụta maka “iji chi ụgha ha jikọtara Jizọs, na-eme ka o yie ka hà bụ otu.” Jizọs abụghị Chineke n’ihi na ọ dị ike. Jizọs bụ Chineke n'ihi na o biri ndụ mmadụ kwekọrọ na Iwu Mama.
Ntuziaka nke John Africa kuziere na Chineke bu onye kariri (nke adi ma oburu na ihe di) ma buru onye puru iche na ihe nile. John Africa nke Chineke abụghị mmadụ. Chineke nke Ntuziaka bụ ihe okike, ebe niile, nwanyị ("naanị nwanyị nwere ike ịmụ nwa, wepụta ndụ") ike. Ọ kụziri na “ọ dịla anya mmadụ nwere nkwarụ n'echiche nke chi dị ka ike dị iche, ike dị iche, ihe karịrị ike mmadụ, ụkpụrụ nduzi ọ bụghị nke ụwa a. ” Ha na-akuzi na okpukperechi nke uwa mehiere iche n’echiche Chineke dika mmadu kari chi mmadu nke na adighi n’uwa e kere eke, bu ugha nke John Africa kporo “chi synthetic” nke echiche mmadu.
O gosipụtara echiche nke chi nke nwere ike ịbụ, maka iji tụnyere, nkewa dị ka ụdị panentheism. Ebe pantheism bụ echiche nke Chukwu (nke a na-ejikọkarị ya na Gris oge ochie) na Chineke dị n'ime ụwa dị ka "ikike ime mmụọ," pentheism na-egosi na Chineke enweghị ikike ma karịa. Nye John Africa, ụwa nkịtị abụghị Chineke, mana ọ bụ mkpughe nke Chineke. Immanent na transcendent bụ otu ihe. Chineke bụ “ike mmụọ” nke na-efe ifufe, na-ekuda ebili mmiri, ma na-eto mkpụrụ ndị ahụ, ma Chineke adịghịkwa iche n’ụwa. Chineke nwere ike itinye aka na ike okike ma ọ bụrụ na ọ chọrọ, ọ nwere ike ikwu site n'aka ndị amụma ya, ọ ga-enwe ike ịkwụ ụgwọ ikpe na ịbọ ọbọ. Nke a mere na mpaghara akwụkwọ a na-ekwu maka “ike” nke Chineke dịka nke “dị ka unyi,” ma na-ekwukwa banyere ụzọ nke na-eduga Chineke. Unyi (uwa nke bu uwa) bu uzo nke Chineke n’eji gosiputa uzo ya. Ma akụkụ Akwụkwọ Nsọ ahụ na-emekwa ka o doo anya na Chineke enweghị ihe ọ bụla n'okwu: “Ekwula m na mama m abụghị naanị amamihe Ya.” N'ezie, ọ dịghị nkà mmụta okpukpe na-agbanwe agbanwe, na ntụgharị uche nke MOV gbanwere n'oge. Site na mbido 1980 site na onwu ya na 1985, John Africa ghọrọ chi, ya onwe ya. Mana Bugharịa mgbe niile na-ekwenyeghị echiche nke Chineke nke karịrị naanị mmụọ na mmụọ.
Echiche John Africa banyere Chineke sitere na nnukwu ịjụ ihe ọ kpọrọ "nzuzu nke akụkọ ifo." Dị ka ọtụtụ okpukpe ndị Africa na Amerịka sitere na Africa, MOVE jụrụ akụkụ ụfọdụ nke ike karịrị nke mmadụ. John Africa rụrụ ụka megide nkwenkwe ahụ bụ na mmụọ, Chineke, na mkpụrụ obi bụ “ụdị ike karịrị nke mmadụ, nke doro anya na-enweghị isi na-agagharị na mbara igwe.” Ntuziaka na-ekwusi ike na okpukpe ọzọ nke okpukpe ọzọ bụ ịgụhie Akwụkwọ Nsọ na ịkpa arụ n’ebe ụwa na-adị. Ọ bụ ezie na enwere njikọ miri emi n'etiti nkà mmụta okpukpe ya na ọdịnala ụmụ mmadụ n'ime echiche okpukpe nke Africa America, nkà mmụta okpukpe nke MOVE adịghị adabara ụdị ahụ. Ntuziaka nke John Africa enyela nnukwu nkwenye nke iji ike karịrị nke mmadụ, kama, kama, ibulite ihe okike na ihe dị nsọ.
John Africa kụziri na ọ ga-ekwe omume ịgbanar sistem ahụ site na usoro omume okpukpe; ma ndị a hụrụ n'ime Ntuziaka nke John Africa na ndị John Africa gosipụtara n'onwe ya. Nye ya, iji gbanahụ sistemụ mmadụ ga-ebu ụzọ mụta otu esi agụ; nke ahụ bụ, mmadụ ga-ebu ụzọ gosipụta echiche dị iche iche n'eziokwu kwa ụbọchị. Ngwá ọrụ bara uru maka usoro mmụta a bụ ahụ. Nye ya, aru bu ebe di nkpa nke eweputara, ihe omuma banyere ihe omuma banyere ihe omuma na ebe a na-agha agha di n'etiti ezi ihe na ihe ojoo. O dere, sị:
okpukpe anyị bụ ahụ anyị, ọ bụ anya anyị, ntị anyị, mmetụta anyị, njikọ anyị, akpa ume anyị, akụkụ ahụ anyị nke ọbara jupụtara na ndụ, nke ezinụlọ, nke itinye aka na ya, ihe niile dị [sic] ozugbo na enweghị ike ịgbagha, enweghị ike imegharị, kwenye ma ọ bụ kwe nkwa, ma ọ bụ kwụọ ma ọ bụ gbanwere ma ọ bụ nye ya, n'ihi na dịka ahụ bụ ngụgụ, akụkụ, anya, akwara iji tinye aka, ọ bụ ịkụ obi iji dọpụta ọbara nke njikọ, ebe ọ bụ na enweghị eriri nke ahụ nke na-abụghị nke ahụ, ọ nweghị ihe ọ bụla maka ịkwaga ma ọ bụ kpaa nkata na-enweghị inye ndụ dị mkpa, ogwe aka, ụkwụ, anya, akpa ume, ihe niile ihe mmecha mgbe ị nọkọ ọnụ, ịhụnanya nke ezi ezinụlọ, udo nke ntụkwasị obi na-eweta, nnwere onwe nke na-adị naanị mgbe ị kwesịrị ntụkwasị obi, ahụ a na-agagharị agagharị ịbụ, na-enweghị obi abụọ, n'ihi na nke a bụ ume anyị, dị ka O doro anya bụ ezigbo ike nke ezigbo iwu, usoro nke na-eme ka ụzọ dịrị n'otu.
Iji mee ka ndị na-eso ụzọ ya pụọ ​​na mmetụta nke sistemụ, John Africa mere ka ahụ bụrụ ebe a na-enye ọzụzụ. Nye ya, ahụ dị, n'ọdịdị ya na nke emetọghị emetọ, zuru oke. Mana dị ka ihe ọ bụla jidere na sistemụ, ahụ rụrụ arụ, ọbụnadị ozu ndị na-agagharị. Mee ka ndị mmadụ na-agbasi mbọ ike maka izu okè, maka ịdị ọcha zuru oke nke ihe onwunwe ha, ma ha maara na ha agaghị enwe ike iru ya. Ihe dị mkpa, nye John Africa, bụ na ndị na-agagharị agagharị kwenyere na ha nwere ike ime ka ahụ ha zuo oke ma na-agbaso izu okè na ụkpụrụ. Na Ntuziaka, ka o dere, “. . . ruo mgbe ị mụtara ikwere na izu oke, nakweere meanin 'nke zuru oke, ghọta okwu a na-ekwukarị banyere abụrụ, agụụ eziokwu ga-agụ gị, ikpe ziri ezi,' na-enwe ume iku ume, na-ebe akwa 'maka naanị mmiri mmiri nke izu oke ga-eme ka akpịrị ịkpọ nkụ nke akụkọ ihe mere eme kwụsị. . . . ” KPER people ndị mmadụ kweere n'izu okè ma gbasoo ya. Naanị ya, bụ onye nwere onyinye karịrị nke mmụọ, yana ụmụaka na-ebugharị, bụ ndị amụrụ na mpụga nke sistemụ ma bụrụ ndị ewepụrụ na nchịkwa ya, nwere ike ibi ndụ n'ụzọ zuru oke na Mama. Ndị ọzọ enweghị ike iru izu oke, mana a tụrụ anya na ha ga-anwale ịdọ aka ná ntị anụ ahụ.
Ibi ndụ kwekọrọ na Mama nwere ike ịchụso site na nri okpukpe na-egbochi mmadụ. IME ndị mmadụ soro ihe a pụrụ ịkpọ taa, nri a na-eri n'ozuzu ya. Ha na-erikarị akwụkwọ nri, ọka, mkpụrụ, mkpụrụ osisi, mgbọrọgwụ, àkwá ndụ, na-adịkarịghịkwa anụ ọkụkọ na anụ. Site na mkpa, IME ndị mmadụ esiwo ụfọdụ nri, gụnyere osikapa, agwa, na nri ndị ọzọ a na-agaghị eri eri. Dị ka o kwesịrị, nri niile kwesịrị ịbụ anụ ọhịa, ahịhịa, nke a na-ekeghị eke, na-enweghị ntụpọ, na enweghị usoro ọ bụla. Dabere na nkwenye MOVE, Chineke nyere nri n'ụdị na a ga-eri ya. Ọ bụrụ na a ga-ata ata ma lodaa raw, Chineke kpebiri ka a rie ya. Ndi mmadu, n’ihe nile bu ihe efu ya, na e kpebiri ka esi nri. Nri na mmiri nke emeruru emeru na adighi emetuta dika Chineke. Na-eri ụdị nri a (naanị ụdị nri a) na-etinye ndị na-emegharị mmekọrịta na Chineke.
Secondzọ nke abụọ nkuzi nke John Africa dọrọ ozu ahụ aka bụ site na ọrụ. Iji bugharịa ndị mmadụ, ịrụsi ọrụ ike bụ sacrament. Hardrụsi ọrụ ike ga-abụ mmadụ zuru ezu, na Chineke. N'ụbọchị nkịtị, ndị mmadụ na-eteta n'ụtụtụ tupu chi abọọ, banye n'ụgbọ ala ụlọ akwụkwọ ha nwere, wee gbaga na Clark Park, nnukwu ọhịa nke dị nkeji iri site n'ụlọ Powelton. N’ebe ahụ, Gbanwee ụmụ nwoke, ụmụ nwaanyị na ụmụaka gbara ogige ahụ gburugburu otu awa ma ọ bụ karịa. Mgbe ọsọ ụtụtụ gachara, ha laghachiri n’ụlọ ha na-aga nkịta ha. Bugharịa ọtụtụ nkịta n'oge ọ bụla. Ebe ọ bụ na nkà mmụta okpukpe ha machibidoro ha ịhapụ nkịta ha ma ọ bụ na-ehichapụ ha, a na-enwe ebe a na-ere ihe ọhụrụ ọhụrụ. Mgbe ị gagharịchara nkịta, BER sat nọdụ ala maka nri ụtụtụ. Mgbe ahụ ọrụ ụbọchị malitere. Bugharịa ndị mmadụ na-akwado onwe ha site na ọrụ aka na site na ịkọwapụta ọdịmma ha. Ha na-agbakwa ebe a na-asacha n'ihu ụlọ MOVE, nke nwere eriri ugbo na ụfọdụ bọket na sponge. N'ụbọchị ndị ọrụ n'aka, ịsa ahụ ụgbọ ala nwere ike iweta $ 300- $ 400 n'onyinye. Ekewara ọtụtụ n'ime ọrụ ahụ site na okike, n'agbanyeghị na nke a abụghị obere usoro echiche dị ka ọ dị mkpa. Menmụ nwoke ahụ nwetara ọrụ ndị na-adịghị mma na gburugburu ebe obibi ma na-elekọta ịsa ụgbọala. Mụ nwanyị ndị ahụ bụ maka ọrụ na-adịghị agwụ agwụ nke isi nri maka ọgbakọ na-eto eto. Ha na-azụta mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ọhụrụ na ahịa kwa ụbọchị. Ebe ọ bụ na enweghị ọkụ eletrik ma ọ bụ gas ọtụtụ oge, a na-esi nri ka ukwuu n'ọtụtụ nri n'èzí karịa gbọmgbọm.
Ozizi nke John Africa gwara ndị mmadụ ka ha kpachara anya maka ihe ọ bụla na-agbanwe kemịkal nke ahụ. A na-atụ anya ka ha ghara ị smokeụ sịga ma ọ bụ drinkụọ mmanya. A machibidoro ọgwụ dị iche iche (gụnyere wii wii, ọgwụ ọgwụ, na ọgwụ ndị a na-azụrụ ọgwụ) kpam kpam. Ọ kpọrọ ihe ndị a “imebi ahụ.” Otu n'ime ụzọ kachasị dị irè isi gbanahụ usoro nke sistemụ bụ iwepu mmebi iwu niile. N’ỌB MOVNA, mmebi iwu gụnyere iri oke nri, ị drinkingụ nnukwu mmiri, na ihi ụra zuru oke. John Africa enyeghị ntaramahụhụ nke ahụ; mmebi iwu abụghị mmebi iwu megide ya, kama megide Ndụ. Ndụ ntaramahụhụ mebiri iwu. Dịka ọmụmaatụ, mgbe mmadụ drinksụrụ nnukwu mmiri, dịka ọmụmaatụ, a na-ata ha ahụhụ site na mkpa dị ngwa, nke na-egbu mgbu. Mgbe ha drinkụbigara mmanya ókè, ha na-ata ahụhụ hangovers. Mgbe ha na-eribiga nri ókè, ha na-arịa nsogbu nke eriri afọ. John Africa kụziri ka ndị mmadụ na-atụgharị ụfọdụ akara nke ahụ ha (ọkachasị mgbu) dịka ntaramahụhụ sitere n'aka Chineke maka imebi ahụ ha. Ọ ghọtara na, ọ bụ ezie na ịgbalịsi ike izu okè dị mkpa, IME ndị mmadụ ga-adarịrị. N’ime MOVE, o guzobere ihe ọ kpọrọ “ụbọchị ngaghari.” Ndị a bụ oge pụrụ iche mgbe a gbara ndị mmadụ ume ka ha tinye aka na ụfọdụ n'ime mmebi iwu ha na-agbasi mbọ ike iwepụ. N'ezie, ọtụtụ mmebi bụ ihe a na-apụghị ichetụ n'echiche: enweghị ị drugụ ọgwụ ọjọọ ma ọ bụ mmanya na-aba n'anya ma ọ bụ nwee mmekọahụ rụrụ arụ na ụbọchị mmegharị. Kama, MGBE ndị mmadụ na-eri pụrụ bụ nri ratụ ratụ na swiiti, lelee tiivi, ma ọ bụ hapụ imega ahụ́ kwa ụbọchị. Ọ bụghị ụbọchị nke omume ịkwa iko dịka ọ bụ ụbọchị aghụghọ nke onye dibia.
John Africa gbara ndị na-eso ụzọ ya ume ka ha gbanwee ahụ ha ka ha biwe ndụ dị ka okike. Ndị niile na-agagharị agagharị na-eyiri ntutu isi ha, na-enweghị isi na nke a na-ekewaghị ekewa, ụdị ejiji na-ese okwu na mbido 1970, ọkachasị n'etiti ndị isi na ndị na-agagharị agagharị n'Africa, bụ ndị nkwanye ùgwù bụ ụzọ kachasị mma maka ọganihu agbụrụ. Ha yi uwe na-enweghị ejiji. Ma ndị nwoke ma ndị nwanyị yi uwe ọkịrị na-achaghị acha, jeans na-acha anụnụ anụnụ, na akpụkpọ ụkwụ na-arụ ọrụ. Ihe kachasị dị egwu nye ndị nkatọ na-agagharị agagharị, ndị na-agagharị agagharị anaghị asa ahụ, belụsọ maka itinye oge na mmiri. Ha ejighi ncha ma ọ bụ ngwaahịa ọcha. Kama, ha na-eji galik na mkpá akwụkwọ na-ete ahụ́ ha mgbe ụfọdụ. Okpukpo a bu kwa uzo eji eme ka ndi mmadu gosi onwe ha dika ndi ozo ma weghachite aru ha na sistem. Ozizi nke John Africa na-eme ka ahụ dịpụrụ adịpụ na sistemụ ahụ na nke Chineke. Bugharịa uwe ndị mmadụ na-eyi, idebe onwe ha ọcha, na ịhọrọ ejiji ha bụ ụzọ isi kewapụ onwe ha iche dị ka òtù okpukpe. Mana ịbanye na MOVE na-apụ na sistemụ. Lifestyledị ndụ sistemụ ahụ chọrọ (ịrụ ọrụ, mkpakọrịta nwoke na nwanyị na-abụghị ndị na-ebugharị, ọbụlagodi ịnya ụgbọ ala) mere ka ọ sie ike karị mgbe mgbanwe anụ ahụ B MOVR people ndị mmadụ. Mana ndị na-agagharị agagharị chọpụtara na ichere ahụ ha na ọdịdị iji gbanwee, n'ụzọ anụ ahụ na n'ụzọ ime mmụọ. Ozizi nke John Africa nyere ndị mmadụ aka ụzọ ha ga-esi ghọta ahụ ha na nke Chukwu, nke ịkọ obodo ọnụ na ebe ịtọlite ​​ókèala nke ndị mmadụ ha. Bugharịa ahụ ndị mmadụ ghọrọ akụkụ nke okpukpe guzobere, nke dabere na nkuzi nke John Africa.
Ruo mgbe ọ nwụrụ na 1985, John Africa bụ onye ndu na-enweghị mgbagha, n'agbanyeghị na nkuzi, MOVE enweghị onye ndu ma ọ bụ ndị isi. O ji ikike nke Chukwu kwuru. Akpọrọ ya MOVE "Onye Nchịkọba" (ahịrịokwu na Ntuziaka na-ezo aka n'ebe Chineke nọ), ma BEP people ndị tụkwasịrị obi na nduzi ya kpam kpam. Ramona Africa, bụ naanị onye toro eto nke MOVE Bombing, weghaara onye ndu nke MOVE mgbe a tọhapụrụ ya n'ụlọ mkpọrọ na 1997. N'ime afọ ole na ole gara aga, ọgbọ ọhụrụ amalitela ilekọta MOVE. Taa, Mike Africa, Jr., nwa Mike Africa na Debbie Africa, na-anọchite anya MOVE n'ihu ọha.
Kemgbe afọ 1976, MOVE achọghị ndị otu ọhụụ. Ọ bụ, n'ọtụtụ ụzọ, okpukpe mechiri emechi, ọ bụ ezie na mmadụ ole na ole abanyela na-agafe kemgbe ọtụtụ afọ. Taa, enwere ike ịbụ ihe na-erughị otu narị ndị otu MOVE, n'agbanyeghị na ndị na-agagharị agagharị ịnye ọnụ ọgụgụ ziri ezi. A mụrụ ihe ka ọtụtụ ná ndị a na-agagharị agagharị taa. Ha jiri uzo abuo. Okwu a "BU onye otu" na-ezo aka na ndị na-agbaso nkuzi nke John Africa naanị na ndị ọzọ na-anabata ndị ọzọ dị ka onye òtù nke ezinụlọ MOVE. Akụkụ nke abụọ, ndị na - akwado MOVE, dị ike karịa ma gụnye ọtụtụ puku mmadụ gburugburu ụwa bụ ndị na - enweta mmụọ sitere na nkuzi nke John Africa ma na - akwado ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na ndị na - akwado ya.
MEB has na-eche ihe ịma aka abụọ dị iche iche ihu n'akụkọ ihe mere eme ya: ajụjụ banyere otu esi agagharị na ajụjụ banyere otu esi echefu bombu.
Mee ka ndị mmadụ kwenye, site na mmalite nke otu ahụ, na onye ndu ha, John Africa, bụ onye amụma, na nkuzi ya (ma edere ya ma tinye ya) nwere ọrụ ebube na ahụ, yana nkwenkwe na omume ndị mejupụtara ji okpukpe kpọrọ ihe. IBU ND people, Vincent Leaphart bụ John Africa, onye amụma nke nwere ike ịrụ ọrụ ebube, gwọọ ndị ọrịa na ndị merụrụ ahụ, ma gwaa Chineke okwu. John Africa ama anam mme mbet esie ẹkpono Abasi ke ofụri esịt, emi ẹkekotde “mbet” esie. Ọ bụ, dịka otu onye MOVE si gbaa ajụjụ ọnụ mgbe ọ hapụsịrị otu ahụ, "dị ka mesaịa." Mgbe a gwara onye ọzọ MOVE ka o jiri John Africa tụnyere Jizọs, ọ kwara emo, sị, “Jizọs Kraịst — onye ọ bụ? Anyị na-ekwu maka John Africa, onye kachasị elu, onye na-agaghị anwụ anwụ wee dịrị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. BEPU ndị mmadụ, ruo taa, na-akpọsa John Africa dị ka "akara okpukpe na onye dị mma karịa onye ọ bụla ọzọ n'ụwa na karịa onye ọ bụla dịrị ndụ ruo oge ugbu a." Ozizi nke John Africa bụ naanị eziokwu, ụzọ mgbapụta, na eziokwu kachasị. BER, nye ndị nọ n'òtù ahụ bụ okpukpe.
Nye ọtụtụ ndị na-anọghị n'ìgwè ahụ (gụnyere ndị uwe ojii, ụlọ ikpe, ndị agbata obi MOVE, na okpukpe ndị ọzọ), MOVE bụ nanị okpukpe. Qutù Quaker kpọrọ MOVE dị ka “òtù ọjọọ n'okporo ámá nke nwere nkà dị ukwuu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na okpukpe.” Otu ìgwè ndị agbata obi MOVE bụ ndị na-emegide ọnụnọ MOVE na agbataobi ahụ chere na EB anR an nzukọ "ndị na-eyi ọha egwu". Onye ọkaiwu na-anochite anya Birdie Africa jụrụ nkwuputa na onye ahịa ya bụbu onye "MBA MBU" dabere na akara akara na-egosi na nwatakịrị nwere ike isonye n'òtù ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Na nyocha nke onye ọka iwu ahụ, Birdie “abụkwaghị onye otu MOVE karịa nwa onye Republican na ndị Democratic ka otu akara pati ga-eme.” Otu ọkàikpe rịọrọ ka o kpebie ma MOVE ọ̀ bụ okpukpe kwubiri na MOVE “nọọrọ onwe ya n’okpukpe ma nwee nzube dịgasị iche.” Ọbụna òtù okpukpe na-emesapụ aka nke nwere ọmịiko karịa MOVE họọrọ ịghọta MOVE n'okwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị, na-akpọ ha "nzukọ nnupụisi nke na-akwado ịlaghachi n'okike ma na-eleghara nnọkọ mmekọrịta niile anya." N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'akụkụ ọ bụla, MOVE, otu ìgwè nke na-achọsi ike ka a mata ha dị ka okpukpe, hụrụ onwe ha dị ka ndị na-abụghị nke ụwa. Dị ka otu onye kwagara, ya kwuru, "ha na-agagharị agbụ n'okpukpe anyị niile dị ka okpukpe anyị na-agụtaghị ọnụ."
Ihe ịma aka nke abụọ na-eche ihu MOVE nwere njikọta na ncheta akụkọ ihe mere eme. Akụkọ MOVE bụ ihe na-akpata oke ihe mgbu, ma maka ịkwaga ndị mmadụ na ndị nọ na mpụga. Enwere ọtụtụ ndị kwenyere na nke a bụ mmegharị. Onye isi n'ime mkpesa ha bụ na MOVE nwere ọrụ (ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi) maka ọnwụ nke onye uweojii James Ramp. (Bugharịa ndị mmadụ, ọ ga-ahụrịrị, gọnahụ ọrụ ọ bụla maka ọnwụ nke onye uweojii James Ramp.) Nye ọtụtụ ndị na-akatọ ha, MOVE bụ ndị na-egbu ọchụ. Mana nkatọ nke MOVE sara mbara karịa nke a. AKWKWỌ ndị MOVE achọpụtawo na ha kpọrọ ndị mmadụ asị, na-akpọkwa ha asị. Ndị nkatọ na-ekwukarị ihu abụọ nke MOE. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ edemede ọ bụla ma ọ bụ akwụkwọ edere gbasara MOVE na-egosi na John Africa ga-aga n'ụzọ ọ bụla iji zere ịbanye na ahụhụ mana enweghị nsogbu na-agbapụ ndị uwe ojii. Ndị nkatọ a na-eche, ọ bụghị n'ụzọ na-ezighi ezi, otu MOVE si ekwu na ọ sọpụrụ ịdị nsọ nke ndụ ma na-eme ihe ike.
Okwu ndị a na-eme ka a mata ajụjụ banyere etu aga-esi cheta ogbunigwe ahụ. Ruo ọtụtụ afọ, echefuru BOMB na-echekarị na mpụga Philadelphia. Nke ahụ amalitela ịgbanwe. Na 2017, Obodo Philadelphia guzobere ihe nrịbama akụkọ ihe mere eme [Foto dị n'aka nri] na saịtị nke BE Bbing bombu. Ọ na-agụ, sị:
Na May 13, 1985, na 6221 Osage Avenue, agha dị n'etiti Phila. Ndị uwe ojii na ndị ọrụ MOVE. Onye uweojii na-ahụ maka ndị uweojii nke Pa. Tụrụ bọmbụ n'ụlọ MOVE. Ọkụ a na-achịkwaghị achịkwa gburu ndị otu iri na otu, tinyere ụmụaka ise, ma bibie ụlọ iri isii na otu.
Ihe nrịbama akụkọ ihe mere eme na-adabere na olu na-enweghị isi iji zere ịkatọ ụta maka MGBANWE B MOV Bbing, mana ịdị adị ya bụ ihe akaebe na Obodo Philadelphia amalitela ịlụso isi a na-egbu mgbu n'akụkọ ihe mere eme ya.
Image # 2: Foto foto nke MOVE ndị mmadụ.
Foto # 3: Ndị uwe ojii Philadelphia gbochiri isi ụlọ ọrụ MOVE.
Foto # 4: Foto nke mbibi bọmbụ.
Foto # 5: Bugharịa bọmbụ akụkọ ihe mere eme.
** Ihe na profaịlụ a sitere na Richard Kent Evans, Bugharịa: Okpukpe America. (Oxford University Press, 2020) belụsọ ma edeghị ya.